Moe Kai: Rugby games
ဆရာဝန် တယောက် အနေနဲ.တော့ ကွဲရင်ချုပ်၊ ခေါင်းစောင့်မိပြီး ဒဏ်ရာ ရသူတွေကို အမြန် စစ်ဆေး စမ်းသပ်ပြီး ဆက်ကစားနိုင်မလား။ ဆေးရုံပို.ရမလား ဆိုတာတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးရပါတယ်။ တချို. အားကစားသမား တွေကတော့ ကွဲပြဲပြီး သွေးထွက်နေတာတောင် အလွန်ပဲ ဆက်ကစားချင်တော့ သွေးတိတ်အောင် သေသေချာချာ ခြည်နှောင် စည်ထုတ်ပေးပါ။ ပွဲပြီးမှ ချုပ်ပါ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ သွေးထွက်နေရင် ကွင်းထဲ ပြန်မဝင်ရဘူး ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းက ရှိတော့ အသေအချာ ချည်နှောင်ပေးထားတဲ့ ပတ်တီးဖြူဖြူလေးတွေနဲ. သွားပြေးကစားလိုက် ပတ်တီးက ပြေသွားပြီး သွေးတွေ စည်းကျလာလို. အပြင်ပြေးထွက်လာ ပတ်တီးတွေထပ်စည်း ပြန်ဆော့လိုက်နဲ.ပါပဲ။
တနေကုန် ရွှံ.ထဲ ဘွက်ထဲ ကွင်းထဲမှာပေမယ့် သူတို.ရဲ. အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး၊ အသင်းစိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ. ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ ကစားတာကို ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ပွဲတခုပြီးတိုင်း “Doc, Thank you” ဆိုတာလေးတွေနဲ.ပဲကို မောရကျိုး နပ်နေတာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ တကယ် အရေးပါတဲ့ အလုပ်တခုကို လုပ်ပေးရသလို ခံစားရပါတယ်။ ဆေးရုံမှာလို “ဆရာမရယ် လက်ကို စက္ကူနဲ.သျှမိလို (ပိစိညောင့်တောင့် မမြင်ရတဲ့ အနာလေးတွေ)၊ ဆရာမရယ် လမ်းလျှောက်ရတာ နဲနဲ အားမရှိ သလိုပဲ၊ ခေါင်းထဲက နဲနဲ နာနေသလုိုပဲ” ဆိုတာမျိုးတွေ သိပ်မတွေ.ရဘူးပေါ့နော။